Xusuusin: Caawa ayaa saacada loo badalayaa xiliga sommerka. - NorSom News
Caawa oo ku aadan axada ugu danbeysa ee bisha Maarso, waxaa bilaaban doono waqtiga xagaaga ama kuleylaha, waxaana caawa saacadu marka ay tahay 2-da habeenimo waqtiga Norway horey dib loo dhigi doonaa hal saac.
Saacadaha digitalka ee ku xiran mobilada, baabuurta iyo computerada ayaa inta badan isku badala si iskood ah(Automatic ah), balse saacadaha ku xiran guryaha iyo kuwo aan digitalka aheyn ayaa u baahan in dib loo celiyo hal saac.
Midowga Yurub ayaa wada dood ku saabsan in guud ahaanba la joojiyo isbad-badalka waqtiyada xagaaga iyo qaboobaha ee saacada horey iyo gadaal loo celiyo. Waxeyna u badantahay in sanadka 2021 badalka saacada ee xiliga qaboobaha la joojin doono.
Previous articleTaajirkii Soomaaliya qalabka ugu deeqay, oo Norweyna qalab kale soo gaarsiiyay.
Next articleDaawo: Booliska iyo laamaha caafimaadka oo soomaalida ka cabanaya